"मेरो लागि प्रार्थना, पवित्र परमेश्वरको प्रणय, तपाईं अल लगनशील भई मेरो प्राण को तिमीलाई एम्बुलेन्स सहायक र molitvennitse मा ugodnitsa।" यो हरेक दिन लागि संरक्षक सेन्ट भ्यालेन्टाइन को प्रार्थना छ। को अर्थोडक्स ख्रीष्टियन परम्परा अनुसार नाम दिन तपाईं आफ्नो पवित्र मध्यस्थकर्ताको लागि प्रार्थना गर्न चर्च मा खर्च गर्न आवश्यक छ। ल्याटिन रूपमा अनुवाद देखि नाम हो ", बलियो बलियो र स्वस्थ।" दिन प्रणय नाम वा अन्य शब्दहरुमा, नाम दिन नै नाम, शहीद Valentina (Alevtina) सिजरिया (प्यालेस्टाइन), 308 विज्ञापनमा कार्यान्वयन थियो को स्मृति मा अर्थोडक्स चर्च द्वारा revered संग मान्छे
चर्च पात्रोमा नाम दिन प्रणय फरवरी को पालन 23 (10)। यो दिनमा एक pious जीवन, गरिब मदत नेतृत्व र मसीही विश्वास भनौदाहरूले गर्ने शहीद मनाइन्छ। पर्याप्त पूरा गर्न जन्मदिन पार्टी Valentina क्रममा, कम्तिमा यो नाम को संरक्षक सेन्ट को जीवनको इतिहास थाहा हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई धेरै।
यहाँ ती छ। मायालाई देर III शताब्दी बस्ने मुख्य रूप यसको martyrdom बारेमा जानकारी बच गर्न। ती दिन, प्यालेस्टाइन भूमि Firmilian नियम भनेर मसीही शिक्षा र तिनीहरूलाई प्रचार गर्नेहरूलाई मा, एक भयानक घृणाको थियो। सिजरिया हुँदा अन्य जस्तै ठूलो शहर, को अधिकारीहरु रोमी साम्राज्यको procurators भनिन्छ गर्न।
पवित्र कन्ये शहीदहरूको इतिहास
पवित्र कुमारी-शहीद प्रणय, Ennafa र पावलले सम्राट् Maximilian द्वितीय गैलरी (305-311 ई.पू.) को शासनकालमा शहीद थिए। मायालाई प्यालेस्टाइनमा सिजरिया आए, पवित्र Ennafa गाजा (दक्षिण प्यालेस्टाइन), सेन्ट पल थियो - सिजरिया को छिमेकी बाट।
को procurator द्वारा Firmilianu पहिलो पवित्र Ennafa नै एक मसीही घोषणा जो, वितरण भएको थियो। त्यो अचाक्ली कुटपिट भएको थियो, एउटा पोस्ट बाँधिएको अप र उनको शरीर मार्फत रगत flogged। दोस्रो प्रणय, को मूर्तिपूजक देवताहरूको उपासना गर्न चाहने भएन परिणाम र त्यसपछि मूर्तिपूजक मूर्तिहरू गर्न मन्दिरमा उनको लिन आदेश थियो, त्यसैले त्यो बलिदान गरे। बरु, त्यो आगोको वेदी पत्थर मा फाले र उसलाई उनको फिर्ता गरियो।
Pissed Firmilian आफ्ना सैनिकहरूलाई ruthlessly बाध्य करङहरु उनको पिटे, र त्यसपछि उनको टाउको र उनको सेन्ट Ennafii काटेर गर्न आदेश दिए।
परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरे र मसीहीहरूले उपस्थित अघि bow गर्ने तेस्रो brutally यातना सेन्ट पल, पनि, तरवार उनको टाउको झुकाए।
यो सबै भयानक कुरा 23 भयो फरवरी मा (10) 308 AD सिजरिया को शहीद - अहिले यो दिनमा Valentina को नाम दिन मनाउन। र प्रतिमा "Martyr प्रणय" अब मदतको लागि उनको बारी सबै पीडित मद्दत गर्छ।
प्रणय दिवस, जन्मदिन पार्टी अर्थोडक्स महिलाहरु
यो सामान्यतया विश्वास, भक्ति र प्रेमको बलियो, परमेश्वरको कृपा, क्षमा र अनुग्रहको सोधे छन् जो विश्वासी, गर्न प्रभुलाई बिन्ती कि प्रणय प्रार्थना।
चर्च पात्रो नाम दिन Valentina अर्थोडक्स मसीहीहरूले गहिरो श्रद्धाको यो पवित्र प्रार्थना र बस झूटा अगमवक्ताहरू र झूटो धार्मिक शिक्षाले त्यो piety ज्यान राखिएको छ कि, आफ्नो प्राण र विचार को प्रलोभन सुरक्षित छुटकारा रही बारेमा उनको सोध्नुहोस्।
वैलेन्टिन। दिन अर्थोडक्स मानिसहरू नाम
महिला नाम प्रणय पुरुष नाम वैलेन्टिन आउँछ। आफ्नो मसीही विश्वासको लागि लडिरहेका को अन्त सम्म नै नाम सन्तहरू।
एक वेलेंटाइन Dorostolsky, 288 विज्ञापनमा शहीद दिन आफ्नो स्मृति7मई (24 अप्रिल) मा मनाइन्छ।
उहाँले त्यो नियम Avsolane अन्तर्गत योद्धा थियो, केवल 30 वर्ष पुरानो थियो र Moesian Dorostol शहर आए। त्यतिबेला हामी ख्रीष्टियनहरू एक सताइयो थियो। र उहाँले खुल्लमखुल्ला विश्वास ख्रीष्टमा, उहाँले भोगे जसको लागि भनौदाहरूले।
प्रतिमा प्रणय Dorostolskogo
पवित्र शहीद प्रणय Dorostolskogo सधैं धर्मत्यागीहरू विरुद्ध सुरक्षा र राम्रो-हुनुको साँचो विश्वासीहरूलाई भन्दा गार्ड खडा गर्ने ख्रीष्टको सिपाही, रूपमा revered। को को प्रतिमा संरक्षक सेन्ट विश्वासको स्वास्थ्य र आत्मा बलियो बनाउन मदत गर्नेछ। यो पवित्र प्रतिमा मार्फत, तपाईं विश्वस्त पाउन सक्छौं र प्राप्त फिक्री र निराशा को छुटकारा।
को जन्मदिन पार्टी मा, या Valentina Valentina सधैं प्रभुको र आफ्नो ओठ मा आफ्नो नाम संग नाम महिमा गर्ने प्रार्थना revered शहीदको आफ्नो भयानक मृत्यु लिए।
pharmacists को संरक्षक सेन्ट - र त्यसपछि सेन्ट भ्यालेन्टाइन, बिशप Interamnskom जीवन सम्झन गर्न imperative छ। आफ्नो स्मृति जुलाई 30 (अगस्ट 12) मा मनाइन्छ।
वैलेन्टिन रोमन - को शहीद प्राचीन, को क्लौडियसको द्वितीय को शासनकालमा बस्ने मसीहीहरू खेदो। यो रोमन चिकित्सक र पुजारी घायल र बिरामी मसीहीहरूले मदत गरे। यो लागि थुनामा परेका थिए। जेल गार्ड Asterius गोप्य, आफ्नो stepdaughter निको गर्न सेन्ट सोधे आफ्नो दृष्टि गुमाए। केटी नेतृत्व गर्दा पवित्र मानिसले आफ्नो प्रार्थनाको उनको निको पार्नुभयो। त्यसपछि सारा परिवार Asteria बप्तिस्मा। म यसको बारेमा सुने, गभर्नर प्रणय कार्यान्वयन।
हामी देख्न सक्छौं रूप मा, अर्थोडक्स चर्च मा प्रणय नाम सन्तहरू धेरै थिएन, तर हाल सम्म ती सबै, येशू ख्रीष्टमा विश्वास राखे।
प्रेमीहरूको को संरक्षक सेन्ट
नाम दिन नाम प्रणय, केही 14 फेब्रुअरी मनाइन्छ। अध्ययन मात्र किनभने प्रणय दिवस घटेका धेरै दन्त्यकथा दिन को छवि नाम उत्पत्ति भएको देखाएका छन्, र यो मध्य युग को रोमान्टिक साहित्यको सबै धन्यवाद, ख्रीष्टियन सुरुतिर मा विश्वास मृत्यु जो छैन शहीदको छ।
क्याथोलिक क्यालेन्डर मा, यस छुट्टी, यो दिनमा तिनीहरूले स्मृति दिन मनाउन किनभने छैन संन्यासी Cyril को र Methodius। प्रणय दिवस (वा नाम दिन नाम दिन), फेब्रुअरी 14 मा मनाउन यो नाम प्रेम धेरै मान्छे, तर यो गलत छ। यो यस्तो मामिलामा दक्ष फेरि परमेश्वरको रिसाउँछन् छैन हुन राम्रो छ।
पत्रुस र पावल चर्च टान्नर मा। Veliky Novgorod पुरातन संस्कृति को स्मारक
दिन सेन्ट पीटर्सबर्ग को Xenia सम्झनामा को - फेब्रुअरी 6
परमेश्वरले "Vsetsaritsa" को आमा को मन्दिर। को भर्जिन "Vsetsaritsa" को प्रतिमा अघि प्रार्थना
पुजारी - यो हुनुहुन्छ? ठूलो साथीहरू
Piety - यो के हो? शब्द को अर्थ "piety"
चमत्कारी-काम प्रार्थना "Vsetsaritsa" भर्जिन
माज्दा Premacy: प्राविधिक विनिर्देशों, वर्णन, समीक्षा
एमबी र ट्राफिक के हो
कीमा बनाएको माछा को व्यञ्जन: व्यञ्जनहरु। तपाईं कीमा बनाएको माछा के गर्न सक्छौं?
किन ऐनामा तस्वीर जवाफ देख लिन सक्दैन
क्षेत्रीय अर्थशास्त्र र व्यवस्थापन: व्यक्तिगत क्षेत्रहरूमा एक कुशल अर्थव्यवस्था लागि दुई सँगसँगै अवधारणाहरु
विवरण र भूमिगत Kharkov को रेखाचित्र
Tatyana मोस्कोव्स्काया: clairvoyant
दुबई मा पर्यटन र होटल अचल सम्पत्ति